how to root htc desire hd ? — MYSTERY ZILLION
how to root htc desire hd ?
please help me! I want to know how to root my desire hd step by step .
baseband version 12.28g.60.140fu_26.05.27_m3
kernel version 2.6.32.21_g46445e7
Build number 1.84.707.2 CL335251 release-keys
software number 1.84.707.2
Read it in the following site.
အစ်ကို့ရဲ့ဖုန်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့တူနေတယ် ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောပြမယ်နော်. base number 1.84.xxx က root လို့မရဘူးလို့ forum တွေမှာပြောထားတာတွေ့တယ်(ကျွန်တော်ရှာတွေ့သလောက်)..နောက်ဆုံးတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း downgrade ချပီး လုပ်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်.. version ကတော့ 2.2 ဖြစ်သွားတယ်.base number 1.32.xxx ဖြစ်သွားတယ်. root လုပ်ဖို့ကတော့ visionaryplus.r14 ဆော့လ်ဝဲသုံးတယ်..DHD က ပိုရှုပ်တယ်လို့ထင်တယ်..root လုပ်ပီးသွားလို့ဖောင့်ထည့်ဖို့အတွက် bootloader မှာ S-OFF မဖြစ်ရင် ဖောင့်က တစ်ရက်လောက်ပဲကြည့်လို့ရတယ်နောက်တော့ပျောက်သွားတယ်..ကျွန်တော့်ရဲ့သူငယ်ချင်းဖုန်းမှာတုန်းက S-OFF မလုပ်ပဲဖောင့်ထည့်လိုက်တာ စက်က htc logo ကနေဘာမှတတ်မလာတော့ဘူး.root လုပ်ပီးတာနဲ့ clockwordmod install လုပ်ပီး rom ကို backup လုပ်ထားရမယ်..အစ်ကိုလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဖိုင်တွေကို share ပေးမယ်..ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပြတာပါ.
my phone is HTC wildfire s / android version 2.3.3
( How to make S-ON to S-OFF? )
please tell me......please
S-Off ကတော့ တူတူပဲ။ လုပ်ကြည့်ပါလား. ကျွန်တော်ကတော့လုပ်ပြီးလို့ ပြန်ရေးထားတာ. အာလုံးအိုကေတယ်။ အောက်ကလင့်မှာကြည့်လိုက်ပါ။